नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्– उपसभामुखले राजीनामा दिन केही समय माग्नुभएको छ
२०७६ पौष २८ सोमबार ०६:१९:००
नेकपा सचिवालयले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निर्णय गर्‍यो, तर उहाँले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो, अब सचिवालयको निर्णयको औचित्य के छ ?
हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय नेतृत्वको केन्द्रबिन्दु हो । सचिवालयले गरेको निर्णय पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकले मान्नैपर्ने बाध्यता छ । अहिले उपसभामुखले पनि त्यो निर्णय र सुझाब मान्नुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । उहाँले केही समय माग्नुभएको छ, त्यो समयभित्र अवश्य पनि पार्टी निर्णयलाई सम्मान गर्नुहुनेछ ।
उपसभामुखले पहिले सभामुखको उम्मेदवार टुंग्याउनुस्, म राजीनामा दिन्छु भनेर अडान राख्नुभएको छ । तपाईंहरूले उम्मेदवार नटुंग्याउने, उहाँले राजीनामा नदिने हो भने त समस्याको गाँठो नफुक्ने देखियो नि ?
पार्टीले आफ्नै प्रक्रियाअन्तर्गत निर्णय गर्छ । कतिपय निर्णय चरणबद्ध ढंगले गर्छ । अहिले सभामुख पद खाली छ । संवैधानिक रूपमा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टीबाट हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सभामुख पद हामीले लिन पहिला उपसभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । पार्टीले जसलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाए पनि पहिला उपसभामुखको राजीनामा अनिवार्य छ । त्यसपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ । पार्टीले अहिले एकदम ठीक निर्णय गरेको छ । सभामुखको निर्णय गर्न त बाँकी छँदै छ नि । ्
उपसभामुखले पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेकाले पार्टीको निर्देशन लागू हुँदैन, करकाप र डरमा नपरी काम गर्नेछु भनेर उपसभामुखको शपथ खाएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्छु भन्नुभएको छ, यसले त राजनीतिक गतिरोध देखियो नि ?
त्यसो हो भने त संकटको समाधान भइहाल्यो नि । उपसभामुख स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, नेकपामा सम्बद्ध हुनुहुन्न भने सभामुखको निर्वाचनका लागि के समस्या भयो त ? जुनसुकै पार्टीले सभामुखमा उम्मेदवारी दिए पनि भइहाल्यो नि ।
अरूले गरेको गल्तीको सजाय मैले किन भोग्ने भन्दै उहाँले सभामुखमै दाबी गर्नुभएको छ, उहाँलाई सभामुख बनाउन पार्टीलाई के अप्ठ्यारो छ ?
डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सभामुखका लागि उपयुक्त पात्र नै हो । उहाँ योग्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ । नेकपाभित्र त्यस्ता योग्य उम्मेदवार दर्जनौँको संख्यामा हुनुहुन्छ । योग्य साथीमध्ये पनि अहिलेको आवश्यकताअनुसार छनोट गर्न पार्टीले स्वतन्त्रपूर्वक सोच्छ र निष्कर्षमा पुग्छ । त्यसमा कुनै पनि दबाब र सर्तका आधारमा पार्टीले निर्णय गर्दैन । सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ ।
एकातिर पार्टीले निर्देशन दिएको छ, तर सामाजिक रुपमा उहाँको पक्षमा समर्थन र सद्भाव बढेको देखिन्छ । त्यस्तै, उहाँलाई ठूलै राजनीतिक ‘ब्याकअप’ पनि छ भन्ने अर्को विश्लेषण पनि छ, तपाईंहरूको बुझाइ के छ ?
ती कुराबारे मलाई केही पनि जानकारी छैन । जानकारी भए पनि अहिले कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ । डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे एउटा बफादार र योग्य महिला कार्यकर्ता हो । उहाँको निष्ठाबारे हामी जानकार छौँ, उहाँले पार्टीको निर्णयलाई सर्वोपरी राख्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अहिले चित्त नबुझेका कतिपय कुरा उहाँले बाहिर राख्नुभएको होला ।
पूर्वएमाले र माओवादी समूहबीच भागबन्डा नमिल्दा एक महिनासम्म संसद्लाई नेकपाले बन्धक बनायो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ, त्यसप्रति तपाईंहरूको जवाफ के छ ?
दुई पार्टी मिलेर भर्खरै नेकपा बनेको सबैको जानकारीमा छ । एकतालाई अझै सुदृढ, खँदिलो र समुन्नत बनाउनुपर्नेछ । पार्टीलाई अझै वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक, भावनात्मक र कार्यशैलीगत रूपले पनि एकताबद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यी आवश्यकताको धरातललाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीले निर्णय गर्छ । त्यो निर्णयलाई हामी सबै मान्न समर्पित छौँ ।
६ माघसम्म पनि उपसभामुखले राजीनामा दिनुभएन भने नेकपासँग के विकल्प रहन्छ ?
हामीले धेरै विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने पनि संसद्को प्रक्रिया अघि बढ्छ । संसद् अघि बढेर निर्णय गर्छ ।
नेकपाका शीर्ष नेता भेट्दै चिनियाँ राजदूत, आज भेटिन् झलनाथ खनाललाई